N'ogbe Super Clear Zirconia Disc 98mm Oghere Zirconia nwere ọtụtụ ihe maka ihe eji eme eze eze dakọtara emepe CAD CAM emeputa na onye na-eweta ngwaahịa | Yurucheng
Super Clear Zirconia Disc 98mm Multi-Layer Zirconia Block for Dental Crown Material dakọtara Open CAD CAM
Ahụmịhe ahịa ngwaahịa soplaya
Onye mmebe ọkachamara na ngalaba ahịa maka ọrụ gị
Alibaba onye na -eweta ọla edo, ụlọ ọrụ nke CE & ISO ghọtara
24 awa n'ahịrị, a ga -aza ajụjụ niile n'ime awa 24 n'oge
Ngwaahịa anyị bụ seramiiki denture zirconia ngọngọ, ngwa CADCAM kwekọrọ, ngwa mbipụta 3D na ngwaahịa ọnụ ndị ọzọ. Dị ka onye na -ebubata ihe na -ekwu okwu ọnụ, anyị nwere ike ịnye ihe eze dijitalụ, akụrụngwa ezé, ngwanrọ eze na ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ dijitalụ.
Usoro dakọtara na nha SHT ọtụtụ zirconia ngọngọ:
Q1. Ị bụ onye nrụpụta, ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ na -emepụta OEM/OBM.
Q2.Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ?
A: Ụdị ịkwụ ụgwọ: T/T, West Union, Paypal, L/C na wdg (nnyefe ego nye onye zụrụ ya) Iwu ndị ọzọ Amụma atụ: Anyị nwere ike ịnye nlele na -enweghị n'efu.
Q3. Enwere nnukwu ego maka ogbe ahụ?
A: Anyị na -enye ego maka nnukwu ego.
Q4.Ị na -enye ọrụ OEM?
A: Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM maka ihe eze.
Q5.Kedu ka m ga -esi nye iwu?
A: Anyị ga -ekwu okwu mgbe ị zitere anyị atụmatụ ịzụta gị (gụnyere aha ngwaahịa, ihe nlereanya na oke). Ọ bụrụ na ị kwenyere na nkwupụta ahụ, biko zitere anyị aha ụlọ ọrụ gị, adreesị na ekwentị maka nnyefe ngwongwo. Anyị ga -eme akwụkwọ ọnụahịa proforma wee gwa gị ụzọ ịkwụ ụgwọ. A ga -agwakwa nkọwa nnyefe ngwongwo nke ọma.
Q6. Kedu usoro ọnụahịa gị?
A: Ọnụ ahịa anyị bụ ọnụahịa EXW CIF & FOB, nabata ịkpọtụrụ anyị ozugbo site na email, whatsapp.
Q7. Kedu oge nnyefe?
A: 5-7 ụbọchị ọrụ site na awara awara.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu n'iji ya, ị nwere ike ịkọwa nkọwa nsogbu ahụ, anyị ga -ajụ onye ọka iwu ka ọ nye gị azịza gị. Enwere ike ịnye akụkụ ahụ mapụtara ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Nke gara aga: YUCERA eze ihe nrụpụta akụ na ụba eze lab zirconia blocks
Osote: Yucera eze ST zirconia ngọngọ maka sistemụ cad / cam / zirconium eze maka ụlọ nyocha CAD
Zirconia na -egbochi eze
Ihe mgbochi Zirconia Multilayer